Nepaliwebsite.com - News
शिव परियारको दशैं बिशेष गित “बर्षौं भो छोडेको” सार्वजनिक ( भिडियो)
नेपालीहरुको महान् पर्व दशैँको अवसर पारेर चर्चित गायक तथा संगीतकार शिव परियारको आवाजमा रहेको “बर्षौं भो छोडेको” गीत भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
“नभेटी नभेटी” भाग दुईको रुपमा सार्वजनिक भएको गितमा गितकार तथा कवि श्वेता मैनालीको शब्द रहेको छ ।
सार्वजनिक गीतमा बिदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरुको जीवन कथा ,आफ्नो परिवार प्रतिको माया प्रेम अनि सम्झना र पीडाले सताइरहने दैनिकीलाइ प्रस्तुत गरिएको छ ।
ब्रायन राईको निर्देशनमा बनेको भिडियोमा सुलक्ष्यन भारती र केनिपा सिहंको अभिनय रहेको छ । गितमा सुजिल कर्माचार्यको संगित , बिनय कंसाकारको सम्पादन रहेको छ ।
एनसेल को सपोर्टमा निर्माण गरिएको यस गीतलाई एनसेल ले आफ्ना सम्पूर्ण ग्राहकहरुलाई दशैँको सांगीतिक उपहारको रुपमा समर्पित गरेको छ ।
गितलाई एक बर्षअघि सन् २०१६ को नोभेम्वरमा गायक परियारले अन्प्लग्ड भर्सन युट्युवमा सार्वजनिक गरेका थिए ।
दान दिने महानुभावहरूको नामवली
​चार दिनमा उठेको दान दिने महानुभावहरूको नामवली
बोस्टनमा पशुपतिनाथको तथा बुद्ध सहितको नेपाली कम्युनिटी सेन्टर निर्माणका लागि आयोजना गरिएको ‘बोस्टन सप्ताह’मा दान सङ्कलन तिव्ररूपमा भइरहेको छ । बोस्टन सप्ताहमा सात दिनमा जम्मा जम्मा १,५३०,७९९.१६ दान सङ्कलन भएको छ । यो महाअभियानमा सबैजना सहभागी होऔँ ।
यो सम्पूर्ण दाताहरूको अन्तिम सूची हैन। पूरा सूचि तयार हुँदैछ। दाताहरूको नाम पूरा रूपमा अनलाईन गर्न हामीलाई केही समय लाग्छ।
(कसैको नाम वा रकम फरक पर्न गएको भए हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला । सम्पूर्ण दाताहरूको नामावली प्रकाशित गरिने छ र सबैलाई प्रमाणपत्र दिइनेछ ।)
सप्ताह आयोजक मूल समिति
बोस्टनमा नि:शूल्क दन्त परिक्षण शिविर सम्पन्न
नेपाली महिलाहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल, न्युइङ्ल्यान्ड ('एनडव्लुजीएन'- न्युइङ्ल्यान्ड च्याप्टर)ले बोस्टनमा नि:शूल्क दन्त परिक्षण शिविर आयोजना गरेको छ । 'समरभिल मिडिया सेन्टर' समरभिलमा आयोजित शिविर डा. गरिमा राना र 'वेस्ट ब्रडवे फेमिली डेन्टल'को सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो ।
सञ्जालको केन्द्रीय अध्यक्ष रुक्मिणी कार्कीले आफ्नो संस्थाले महिलाको हक र हितका साथसाथै यस्ता समाजिक कार्क्रमहरू पनि गर्दै जाने कुरा बनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा 'एनडव्लुजीएन'- न्युइङ्ल्यान्ड च्याप्टरका सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
​बोस्टनमा ‘अर्थात् पात्रहरु’
अमेरिकाको बोस्टनमा अवस्थित ‘हिमालयन हेरिटेज कल्चर एकेडेमी’ले कला, साहित्य, संस्कृति एवं सम्पदाको क्षेत्रमा सन् २०१५ देखि सक्रिय रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा यस एकेडेमीले कृष्ण शाह यात्रीको परिकल्पना र निर्देशनमा नाटक ‘अर्थात् पात्रहरु’ मञ्चन गरेको छ । नाटक मञ्चनसँगै एकेडेमीको आफ्नै प्रेक्षालयमा ‘नाटक लेखन, अभिनय र नाट्य प्रस्तुति’ विषयको नाट्य कार्याशाला आयोजना पनि गरेको छ । कार्याशालामा बोस्टनमा अवस्थित डेढ दर्जन नाट्यकर्मी एवं साहित्यकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । नाट्य कार्याशालाबाट तयार पारिएको ऊक्त नाटकमा सुरेश वाग्ले, रोशनी खनाल, लालगोपाल सुवेदी, ममता कमाचार्य, दीपा राई पुन, सागर शंकर, लक्ष्मी खनाल, अनुभव थपलिया, गौरवी काफ्ले, स्वयम् पोखरेल लगायतले अभिनय गरेका थिए । नाटकमा पाश्र्व संगीत प्रख्यात सारंगीवादक श्याम नेपालीले दिनु भएको थियो ।
नाटकले घाटे जीवनको पीडा समेट्नुका साथै मानिसले मृत्यु पश्चात आफ्ना शव गाड्का लागि ठाउँको जोहो गर्न गरेको संघर्षको कथा बोलेको छ । समसामयिक विषयमा केन्द्रित भई तयार पारिएको नाटक ‘अर्थात् पात्रहरु ’लाई दर्शकले खुबै रुचाएका थिए । कार्यक्रममा संयोजक सुरेश वाग्ले भन्नुहुन्छ, “हामीले गीत, संगीत, नाटक र संस्कृति विधाका फरक प्रस्तुति दिने उद्देश्यले यस पटक नाटकलाई रोजेका हौं । यस कार्यशालाबाट तयार पारिएका मध्ये उत्कृष्ट १० ओटा नाटकलाई हामी ‘बोस्टनमा नाटक’ नाम दिई पुस्तक समेत निकाल्नेछौं ।”
'धुर्मुस-सुन्लती अभियान सहयोग कार्यक्रम बोस्टन'मा झन्डै १४ लाख सङ्कलन
"मानवता र सद्भावका लागि सहकार्य
राष्ट्र निर्माण, तपाईँ हाम्रो अभियान"
भन्ने नाराका साथ थालिएको धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनको अभियानलाई अमेरिकाको बोस्टनबासीहरूले एक कार्यक्रम गरी सहयोग गरेका छन् ।
'धुर्मुस-सुन्लती अभियान सहयोग कार्यक्रम बोस्टन' कार्यक्रम उत्साहपूर्ण सहभागिता र सहयोगका साथ सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा हिमालयन हेरिटेज कल्चलरल एकेडेमीका कलाकारहरूको साङ्गीतिक प्रस्तुति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा १३१ जना सहयोगीहरूबाट​ रु. १३,८८, १००.०० रकम सङ्कलन भएको र सो रकम 'धुर्मुस-सुन्लती फाउण्डेसन'लाई पठाइसकिएको जानकारी अभियानका एक सहयोगी सुरेश वाग्लेले जानकारी दिएका छन् । सो​ कार्यक्रमको रात्रिभोज र कार्यक्रमस्थलको सौजन्य हिमालयन बिस्ट्रो रहेको थियो ।
सहयोग गर्ने दाताहरूको नामावली
​'धुर्मुस-सुन्तली अभियान सहयोग कार्यक्रम बोस्टन' नामावली
Fundraiser Event - 03/19/2017
Himalayan Bistro, West Roxbury, MA
Dinner, hall and service Sponcer:
​बोस्टनमा 'भूटानी कलाकारसङ्ग एक साँझ' सम्पन्न
- ​सुरेश वाग्ले
'भूटानी समाज बोस्टन'ले बोस्टनमा 'भूटानी कलाकारसङ्ग एक साँझ' कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा बरिष्ठ भूटानी गायक प्रताब सुब्बाको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो । उहाँले 'बन्धनको चिनो' लगाएतका चर्चित गीतहरू गाउनु भएको थियो । गायक प्रभु शंकर र प्रविण परियार तथा गायिका चन्द्रकला मगर र हिरा रसाइलीले बिभिन्न आधुनिक गीतहरू गाएर दर्शकहरूको मन जित्न सफल हुनुभएको थियो । चर्चित तवलावादक प्रमोद उपाध्यायले तवलाको साङ्गीतिक जादू देखाउनु भएको थियो भने बाँसुरीवादक रञ्जन बुढाथोकी र गितारवादक प्रियान्त सुन्दासको विशेष प्रस्तुति रहेको थियो ।
'सौगात इन्टरनेशनल'का नन्द लगुन, दीपा शंकर लगुन, हिरा रसाइली र सिर्जना खड्काको नृत्यले सबैलाई आकर्षित गरेको थियो ।
धन लेप्चाले सञ्चालन गर्नु भएको कार्यक्रममा एस बी चाम्लिङले रुवाई सुनाउनु भएको थियो । कार्यक्रम संयोजक नन्दू शंकरले विदेशमा रहँदा आफ्नो भाषा र संकृति बिर्सन नहुने भन्दै नेपाली सङ्गीतको विकास र सम्बर्धनका लागि यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहनु पर्ने कुरा बताउनु भयो । कार्यक्रम सौगात इन्टरनेशनल र हिमालयन हेरिटेज कल्चलर एकेडेमीको विशेष सहयोगमा सम्पन्न भएको थियो ।
तस्विर- सुरेश वाग्ले
धुर्मुस-सुन्तली अभियान सहयोग कार्यक्रम बोस्टन
DATE - SUNDAY, March 19, 2017
TIME - 07:00 PM- 9:00 PM
VENUE- Himalayan Bistro Restaurant
Shiva Prakash- (781) 325-2242
Susheel Paudel (857) 253-1383
Nirmala Sherchan- (617) 953-8352
Suresh Wagle- (781) 437-2181
Mabi Singh- (508) 397-1368
Jitendra Shrestha, Bombay Market- (617) 623-6614
Dinner Sponsor : Himalayan Bistro